Tambo yechinguvana fekitari, vatengi
Yenguva Diki Inotakurika Chain Link Fence Panels & Barricades inovakwa uchishandisa zvakajairika matekiniki (tension mabara uye tension mabhendi kuruboshwe kurudyi, akasungwa netayi tambo kumusoro uye pasi) uye prime zvinhu. Iyo ketani inobatanidza yenguva pfupi fenzi system unokwanisa ipa nyore kuisa-uye kubvarura-pasi kukusevha nguva nemari. Iyo chain link zvenguva pfupi fenzi mapaneru emadziro anotsvedza pamusoro pekusimudzira kwepaneru amire, uye sunga pamwe chete kumusoro pamwe nezvigaro zvechigaro kuti upe yemahara-yakamira fenzi tambo yehurefu hwese nekugadziriswa.
Iyo yakasungwa yenguva pfupi fenzi inonzi zvakare inotakurika fenzi, inobviswa fenzi uye nhare mbozha. Zviri nyore kuisa uye kubvarura, saka zviri nyore kwenguva pfupi uchishandisa. Iyo yakasunganidzwa yenguva pfupi fenzi ine mapaneru, zvisungo, kongiri yakazadza epurasitiki base kana simbi base, imwe yakasungwa yenguva pfupi fenzi inogona kuve zvakare yakabatana netambo ine barbed, yeanopesana-kukwira. Iwo akakwenenzverwa enguva pfupi mapaneru ndiwo akakosha chikamu pakati pawo, saka anofanirwa kuve akagadzirwa neakanyanya kuomarara uye chimiro chakasimba.
CHIKAMU CHINODZORA BARRIER
Mhomho yekudzora zvipingamupinyi, izvo zvinodaidzwa zvakare sevanhu vanodzora barricades, French dhizaini chipingamupinyi, simbi bhasiketi rack, uye zvigayo zvipingamupinyi, zvinowanzo shandiswa pazviitiko zveruzhinji.
Zvipingamupinyi zvevanhu vazhinji zvinoitwa nesimbi inorema. Boka rekudzora zvipingamupinyi zvinonyanya kushanda pavanopindirana, vachibatanidzwa kune mumwe nemumwe mumutsara kuburikidza nezvikorekedzo padivi peimwe barricade. Kana ruzhinji rwekudzivirira barricades rakapindirana, vanochengetedza vanogona kugadzira mitsetse isingapindike, nekuti mitsara yakadaro yezvipingamupinyi haigone kukurirwa.